Fanararaotana, Karama Ambany Ary Fahalalahana Kiritika : Fiainan’ny Vahiny Mpiasa an-Trano Any Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Fanararaotana, Karama Ambany Ary Fahalalahana Kiritika : Fiainan'ny Vahiny Mpiasa an-Trano Any Hong Kong
Voadika ny 27 Oktobra 2013 0:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Svenska, Nederlands, English
Ny fitsaràna ny momba ilay herisetra ara-batana sy fampijalin'ireo mpampiasa an'i Kartika Puspitasari, mpiasa an-trano, no nanabaribary indray ny toe-piainana mampalahelon'ireo mpiasa an-trano vahiny any Hong Kong.
Mpiasa an-trano vahiny maherin'ny 310,000 no miasa any Hong Kong amin'izao fotoana izao, ary mandrakotra ny 3 isan-jaton'ny mponina any amin'ny tanàna iraisam-pirenena izany. Fantatra kosa amin'ny politikany momba ny mpiasa an-trano vahiny (FDWs) i Hong Kong. Ankoatra ny lalàna momba ny fifindrà-monina, izay manakana ny fahazahoan'ireo mpiasa an-trano vahiny taratasy ahafahana mitoetra maharitra any Hong Kong aorian'ny fito taona niasàna, manahirana an'ireo mpiasa ihany koa ny hiova sy hifidy ny mpampiasa vaovao, araka ny “lalànan'ny dimy ambin'ny folo andro” izay manery ny FDWs hitady mpampiasa vaovao ao anatin'ny tapa-bolana taorian'ny nifaranan'ny fifanarahana.
Ankoatra izany dia tsy voaaron'ny fepetra mifehy ny karama farany ambany ao amin'io tanàna io ry zareo, no sady araraotin'ireo mpandraharaha mpanelanelana ka voatery hiasa ora maro ary hipetraka miaraka amin'ireo mpampiasa azy, anatin'ny fepetra tsy lavorary.
Fitokonan'ireo mpiasa an-trano Indoneziana ho fanohanana ireo mpiasa an-trano iharan'ny fanararaotana tamin'ny 15 Septambra 2013. Sary avy amin'i Tom Grundy.
Betsaka no tsy nino rehefa nitranga ny tantaran'i Kartika satria noheverina fa “malalaka” ny tsenan'ny asa. Marina fa tsy mihatra amin'ireo mpiasa vahiny izay tsy dia voaaron'ny lalàna toa an-dry zareo tera-tany ny “tombon-tsoa iraisana”. ‘Ndeha jerena ny fitantarana fohy nataon'i Tom Grundy, bilaogera ao amin'ny Hong Wrong momba io tranga io :
Teo anelanelanelan'ny Oktobra 2010 sy ny Oktobra 2012 dia voalaza fa nokapohana taminà rojo sy kiraro, nodorana tamin'ny vy mahamay, nafatotra tamin'ny seza, notapaham-bolo ary noteren'ny mpampiasa azy hanao lamban-jaza sy akanjon'ankizy i Kartika Puspitasari.
Voaheloka telo taona sy telo volana ary dimy taona sy tapany ireo mpampiasa roa tamin'ny 18 Septambra 2013. Nohamarinin'ny mpitsara tamin'ny alàlan'ny porofo, singanina amin'izany ireo ratra 45 tamin'ny vatan'ilay mpiasa ny fanapahan-keviny, nefa nihevitra izy fa diso tafahoatra ireo fijoroana vavolombelona sasany ary tsy azony ny antony tsy nankanesan'i Kartika tany amin'ny mpitandro filaminana.
Nohazavain'i Rosa avy amin'ny left21, izay nanaraka amin'ny antsipiriany ny fitsarana, ny antony “tsy mampino” ny mponina ao an-toerana ilay tantara, amin'ny fandinihany ny fifandraisan'ireo hery tsy mitovy eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa any Hong Kong :
Tsy mitovy lanja ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'ny lafiny lalàna. Nambaran'ny mpitsara avy ao amin'ny Fitsarana momba ny Asa fa “Raha te-hijanona ianao, tsy maintsy mandoa ny vidiny”- araka ny lalàna dia tsy mahazo miasa ny mpiasa mandritra ny fotoana fanaovana ny fombafomba rehetra ara-pitsaràna ary tsy alohan'ny governemanta ny fahazoan-dàlana hijanona ao an-toerana sy ny sakafony. Tsy maintsy alohany (na angatahiny fanampiana amin'ireo vondrona mpanao asa soa) ny saram-pitsaràna sy mba hahazahoana ny fahamarinana. Noho ny tsy fahaizany ny tenim-pirenena ary teren'ny tsy fananana asa, dia ampanginin'ilay lalàna hoe : “raha te-hijanona ianao, tsy maintsy mandoa vola” ireo mpiasa an-trano, hany ka aleony miaritra mangina toy izay miatrika ireo mpampiasa azy ireo any amin'ny fitsaràna.
Fanambaràna roa no tsy noraisina satria hitan'ny mpitsara fa tsy azo antoka ny vavolombelona. Ninoany fa tsy azon'ny mpampiasa atao ny mamatotra ny mpiasa an-trano mandritra ny dimy andro nefa an-dàlam-pifindra-toerana izy ireo. Hitany ihany koa fa tsy marina ny hoe noteren'ny mpampiasa hiakanjo tery na hanao akanjo plastika tsy miloko, teo am-panadiovana ny manoloana ny mpampiasa lahy. Tsy mino ihany koa izy fa tsy afaka nandositra ilay mpiasa, fa kosa nifidy ny tsy handositra.
Ny mahavariana dia ninoan'ny mpitsara ny porofo fa mampijaly, tsy manaja ny maha-olona ary manala baraka ny zavatra nataon'ny mpampiasa, nefa dia navoakany ihany ny didim-pitsaràna araka ny “fepetra ankapobe”-n'ny amin'ny fifandraisana arak'asa “ara-dalàna”, ka nolaviny ny fijoroana vavolombelon'ny niharam-boina. Nirona bebe kokoa tany amin'ny “porofo mivaingana” ny mpitsara, ka tsy noraharahiany ny hery tsy hita maso ateraky ny fandrahonana, ny fikorontanan-tsaina, ny herisetra, ny hanoanana, ny fitokana-monina, sns… Ireo hery tsy hita maso ireo no mampananosarotra ny fandosiran'ny mpiasa.
Na izany aza, raha tokony hanova ny hery tsy mitovy mampifandray ny mpiasa sy ny mpampiasa ny sampan-draharahan'ny fifindrà-monina any Hong Kong, dia vao maika manasarotra ny fiovàn'ny mpiasa mpampiasa vaovao, araka ny nitateran'i Tom Grundy azy tamin'ny fiandohan'ny volana Septambra :
Mba ho ezaka hiadiana amin'ny ‘tsy fisian'ny olana’ amin'ny ‘tsenan'ny asa’, dia nohamafisin'ny governemanta ny lalàna mba hamandrihana sahady ireo mpiasa an-trano nijaly efa ela tao an-tanàna. Tamin'ny herinandro lasa teo izao dia novalian'ny sampan-draharaha miandraikitra ny fifindrà-monina ilay heverina hoe ‘olan'ny daholobe’, tamin'ny fanambaràna fa ho sarotra ho an'ny mpiasa an-trano ny hanapaka ny fifanarahana nataony.
Nohazavain'i Sheila tao amin'ny Stories Beyond Borderst (Tantanra Any Am-pita ) fa tsy rariny ho an'ireo FDWs ny lalàna'ny tapa-bolana navoakan'ny sampan-draharahan'ny fifindrà-monina, tetikasan-dahatsary avy amin'ny vahoaka mavitrika:
Maro amin'ireo mpampiasa any Hong Kong no tsy mahalala akory fa tokony hanana ny fialam-boliny sy ny fotoana malalaka ho azy ny FDWs. Notantarain'i Ada, mpiasa an-trano, tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny sehatra fampielezam-baovaon'olon-tsotra inmediahk.net ny zava-tsarotra sedrain'ireo namany rehefa mba manandrana ny misoratra anarana hianatra any Hong kong izy ireo :
Tetikasa an-tsary avy amin'i Gráinne Quinlan, mpaka sary Irlande monina any Hong Kong, momba ny hoe “Nahoana no manao io ataonao io ianao ?”. Nanontany mpiasa an-trano vahiny maromaro ny ekipa mba hanoratana ny antony nandaozany ny fireneny mba hiasa any an-tany hafa. Sary avy amin'i Tom Grundy.
“Tena nanam-bintana aho fa nampianarin'ny fianakaviako” Omen'ny mpampiaza azy fotoana malalaka koa izy. Mahazo mianatra izy raha toa ka tsy misy fiantraikany amin'ny asany izany. Izany no nisoratany anarana hianatra tapak'andro aminà sekoly. Tena samy hafa ny zavatra ananan'ny namany.
Maro ny mpampiasa no mihevitra fa rehefa mianatra ry zareo dia tsy afaka hiasa tsara intsony. Ny sasany tamin'ireo mpampiasa ny namany dia nandà tsotra izao ny fangatahan'izy ireo mba hianatra. Ny sasany indray tsy sahy manontany ka mianatra an-tsokosoko rehefa matory ny mpampiasa azy. Ny hafa kosa voatery nanajanona ny fianarany indray mandeha isaky ny volana maromaro.
Maromaro ihany ireo vondrona tsy miankina any Hong Kong miara-miasa ka manery ny governemanta hanafoana ny lalàna momba ny fonenana izay natao tamin'ny 2003. Notaterin'i Vera So, mpitati-baovao ao amin'ny inmediahk.net, ny valan-dresaka nataon'ny vondron'olon-tsotra:
Nolazain'i Cynthia Ca Abdon-Tellez avy ao amin'ny Mission For Migrant Worker (MMW) fa tsy azo ekena ny fampiasàna ny fahalalahana monina any an-kafà hanaovana heloka bevava. Ny lalàna mametra ny fiarahana mipetraka dia manery ireo mpiasa an-trano hipetraka any an-dakozia, trano fidiovana na trano fitoeran-korontana, ka mampitombo ny herisetra atao amin'ny mpiasa an-trano.
Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny MMW, tamin'ireo mpiasa an-trano 3.004 nanontaniana dia ny 30 isan-jato no tsy manana ny efitranony fa matory eny an-dàlan-tsara na any amin'ny efitra fandraisam-bahiny. 80 isan-jato iharan'ny herisetra – 60 isan-jato herisetra am-bava, 18 isan-jato herisetra ara-batana ary ny 18 isan-jato fanolanana. Tena henjam-be io toe-draharaha io. Nolazain'i Cynthia fa efa folo taona izay no nametrahana ny lalànan'ny fiaraha-mipetraka ka fotoana tokony hijerena azy indray angamba izao.